Iko kusinganzwisisike kusanzwisisika mune anabolic steroid yenyika | AASraw
/Blog/garari/Iko kusanzwisisika kusanzwisisika mune anabolic steroid yenyika
Posted on 10 / 12 / 2019 by Dr. Patrick Young akanyora garari.
Izvi zvichave zvakanyanya kuwongororwa kwezvakawanda zveruzivo zvinangwa chete, haisi iyo yeku-kutungamira. Izvi hazvireve kuti ndinotendera kushandiswa kwayo kana kubvuma kwekushandiswa.
Kazhinji kusanzwisisika kana kusasanganiswa- kune mhando dzakasiyana dzeavaidhiids. Corticosteroids, iyo ine yakaipa-mhedzisiro Anabolic Steroids, nekuda kwechimwe chikonzero haina dhimoni nevezvenhau uye kushandiswa kwayo kuri KUZVINZWISISA mune dzakawanda zviitiko- kusanganisira nyanzvi uye yehukama mitambo. Ivo vanowanzoshandiswa kurwisa kuzvimba. Kune zvakare Progesterone iyo inoshandiswa mumhando dzakawanda dzekutonga kwekuzvara uye inotorwa nemamiriyoni evakadzi mazuva ese. Anabolic steroid (apa inonzi AS kana AS) ndizvo zvinofungwa nevanhu vazhinji pavanotanga kunzwa "steroid" uye zvese zvakaipa zvakasangana navo.
Wese munhu anosangana mativi akasiyana. Hapana vanhu vaviri vakafanana. Kutaura kuti VANHU vese vaizoona zvinhu zvimwe chete izvozvo kuseka. Vamwe vanhu vane nguva yakaoma yekunzwisisa izvi sekuonekwa mune lambesis tambo. Kune rimwe chete divi rekuti-varume vese vashandisi * vanovimbiswa- uye iri testicular atrophy.
A) Testicular Atrophy- paunosimbisa yakawanda ye Testosterone HPTA yemuviri wako inotanga kuvhara (inomira kugadzira Testosterone nekuti muviri wako uri kupora zvakaringana) Muchidimbu izvi zvinoita kuti mabhora ako aderere. Nguva zhinji hainyatso kuoneka. Zvimwe 25% kuderedzwa, 50% zvakanyanya. Paunenge uchangobva kutenderera, mhanya yako PCT (Post-redhiyo kurapwa) vanodzoka kuzere-size. Haisi yechigarire. Vamwe vanhu vanomhanya HCG (Human chorionic-gonadatropin) vachiri kutenderera kuti vachengetedze mabhora avo pazere-saizi uye zvakare inobatsira mukupora nekuti inochengetedza masero ako eLeydig achishanda.
B) mhanza / bvudzi-kurasikirwa: AS haina kukonzera mhanza kana bvudzi kudonha. Nekudaro, inogona kukurumidzisa maitiro. Kana bvudzi kurasikirwa kumhanya mumhuri yako, shamisika iwe kazhinji ungangozove mukoti wekumhanyisa maitiro aya. Bill Roberts akanyora nezvemhando mbiri dzakasiyana dzeSteroids- Type I uye Type II; Type I ndichiva main complements seTestosterone, Tren, Decca, Sust, nezvimwe uye Type II kuita kunge Winstrol (stanazolol), dbol, anavar, Masteron etc. Vanhu vazhinji vanopomera zvinodhaka seWinstrol uye Masteron Enanthate (Drostanolone) semhedzisiro yekurasikirwa kwebvudzi uye edza kudzivirira iyo madhiragi kana uchinetseka nezve MPB, apo izvo zvisiri izvo mhaka- mhando ini ndine mhedzisiro yakatonyanya kutaurwa paMPB (yemurume maitiro mhanza) kupfuura chero mamwe marudzi emishonga. Uye pachena kuti iyo DHT yakavakirwa zvinodhaka (sema deca) ichave yakaoma pane yako ganda. Nzira chete yekurwisa izvi ndeyokutora Finasteride (propecia / proscar) mamwe matopiki erudzi rwemhando shampoos uye zvimwe zvinhu zvakati.
C) Acne- vamwe vanhu vanobuda kumeso kwavo; vamwe vanhu vanotsemuka pachipfuva chavo kana kumashure… uye vamwe ganda revanhu rinobuda. Zvekare, munhu wese anonetsekana zvakasiyana.
D) Ini ndinonzwa senge izvi zvaifanira kunge zvakafukidzwa pasi pe testicular atrophy uye ini ndangoita kunge ndakanganwa. Nguva zhinji ini ndinonzwa vanhu vachitaura nezve AS kugadzira yako dick kuderera, apo pavanenge vachireva mabhora ako. Nekudaro, kujekesa, yako dick hairegi uye izvo zvinoita sekufunga kwakanyanya sekuti kutora kutora kwemhino kunopwanya mhino dzako. Kana paine chero, neropa rakawanda rinoyerera kunzvimbo iyoyo ndingati iwe unokwanisa kuita zvinopesana nekuitika. Zvakare zvinoenderana nemakomputa aunotora- mamwe madhiragi saDeca naTren anogona kuve akaomesesa pane yako libido (saka chirevo, "deca-dick") uye vamwe vakomana vakasarudza kutora Tadalafil (Cialis) (171596-29-5) kana viagra (haufanirwe kudaro) asi mamwe madhiragi senge akananga Kwayedza (chero mhando) kana dbol ichave newe ichikwira madziro uye inotyisa se… .. Vazhinji vasikana vane murume kana mukomana mukomana kutenderera anoita kunge anonakidzwa nekwavo murume avekutenderera, lol.
E) "Roid-kutsamwa" - Hakuna zvakadaro. Zviri nyore so. Kana iwe uri munhu asingagadzikike, hongu, ivo vanoenda kukuita iwe unonyanya kusagadzikana. Asi zvakare zvekare, zvimwe zvimwe zvinhu nemishonga zvimwe zvinokonzeresa izvozvo. Kana iwe usina kugadzikana mupfungwa kana kunyangwe ukawanikwa uine chirwere chepfungwa haufanire kufunga nezvekutora maseruids. Ini ndinoshuva izvo zvingave zvakarehwa nezve doro. Ruzhinji rwevanhu harukanganiswe neizvi. Vanhu vazhinji vanonzwa sekunge vari mumamiriro ezvinhu ari nani kana kuti havana kusiyana zvachose. Ndiri kuona vanhu vanogona kunge vachibirira cockier nekuti ivo vakanyanya kukura uye vashoma kusimba, asi parutivi izvo, chero chinhu chinoburitsa "roid-nehasha" (hurumende yehurumende kana kwete) iri horseshit.
F) Rufu / nhengo kukundikana / nezvimwe.
MaSteroid haakonzere kuti vanhu vafe kana kutungamira kurufu rwavo nekuda kwekumwe kuita kwakashata. Pakave pasina zvidzidzo zvesainzi zvinoratidza zvakabatana zvakanangana nean anabolic steroid uye kufa. Vanhu vanozonongedza kuZyzz, asi ivo havangonongedza kune yake mhuri yenhoroondo yechirwere chemoyo / mamiriro uye ini handifunge kuti iyo autopsy yakambo zivikanwa pachena? Kuti udzore manhamba eCDC kubva ku2005 kubva kuBigger Stronger Faster:
75,000 Vanhu pagore vanofa neDoro
Vanhu ve435,000 pagore vanofa kubva kuFodya
uye nerufu kubva kune anabolic steroid ……: 3
Iko njodzi dzeavaidhiids ndeyekupedzisira zvakanyanya-zvakanyanyisa. Kufanana kwazvo nemamiriro ezvinhu nePitbulls. Vanhu vazhinji pagore vanofa nekurohwa musoro nemakokonati kana kungodonha pasi masitepisi.
Ehe, kana ma-steroid akaitwa nenzira isiri iyo anogona kuva nengozi. Oral steroid (senge dbol, winstrol, anavar, nezvimwewo) zvine hepatoxic uye inogona kutsamwa zvakanyanya pachiropa chako kana ikatorwa mune yakanyanya kuwandisa uye kwenguva yakareba kwazvo yenguva… uye kana ichinwa doro panguva yekutenderera. Ichi ndicho chikonzero nei zvichikurudzirwa kuita kuti mapanera eropa aitwe pamberi, panguva, uye mushure mekutenderera. Kutora zvinhu senge mukaka thistle kunogona kubatsira kurerutsa mutoro pachiropa chako.
Dzvinyiriro yeropa inogona uye inogona kuenda kumusoro, zvakare zvakanyanya zvichienderana nemakomisheni iwe aunotora (kunyanya Methandrostenolone (Dianabol) powder uye EQ). Kutora tsvuku mbiriso mupunga kunogona kubatsira kuchengeta cholesterol uye BP muchiongorora. Ichokwadi chinhu chinoda kutariswa. Uye zvirokwazvo iri chikonzero nei uchifanira kunge uchidya CHINOTEWA paunenge uchitenderera- usiri kudya pitsa, burger, uye maFrys.
Dzimwe pfungwa dzisina kunaka
MaSteroid ari kutora intramuscularly- kwete mutserendende. Iko hakuna kuputira bhendi rakakomba ruoko rwako kana chero. Kudai waizopinza jini kana kuti nerve kupera waigona kufa. Kune akada nzvimbo jekiseni- yakachengeteka kuve mabhanhire, quads, glutes, uye iyo ventro-gluteal nzvimbo. Vanhu vanowanzo funga kuti mbichana / glutes ndiyo yakachengeteka nzvimbo, ini ndisingabvumirani nekuti zvakawoma kusvika uye nekuti neruzivo rwenzara runomhanyisa padhuze nenzvimbo iyo uye kana ukarova izvo, rombo rakanaka pamwe nehupenyu hwako hwese.
MaSteroid ari uye haasi chishamiso chinodhaka. Unogona kugara pamubhedha wobva wadya mbatatisi uye pamwe wakura, asi kana zviri izvo zvauri kuita kana uchivatora, haufanire kutambisa mari yako. Uchiri kufanira kuita basa racho. Ndichiri chekudya chakachena- ini ndingati zvakachena. Ndichine tarisiro yezvese pane zvese.
Pro-mahormone haisi yakachengeteka-imwe nzira kune maSidsids sezvo iwe uchigona kuzvitenga kuGNC / Yakwana Nutrition / Kwese. Dzine njodzi DZIMWE uye kazhinji kazhinji iwe haugone kutenga chaiyo mishonga yePP ipapo uye iwe uri kwairi chaiyo, nzira yakaoma yekudzora- kana iwe uchinge wapora zvachose. Vana vazhinji kudaro vakaguma paTT kwehupenyu hwavo hwese nekuda kweizvi. Ini handinzwisise kuti sei pasina kumbobvumirwa kupomerana mhosva pazvitoro izvi.
Ko MK-677 (Ibutamoren) inoshanda zvakanaka Kune Musha Kuvaka? Ongororo Yekutsamwa [2019 NEW]	Yakazara Yekutenga Nhungamiro 2019 YeSARM SR9009 Kuvaka muviri